Shacab si yaab leh uga fal-celiyey qoraalkii Farmaajo ee lasoo dhigay Facebook | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Shacab si yaab leh uga fal-celiyey qoraalkii Farmaajo ee lasoo dhigay Facebook
Shacab si yaab leh uga fal-celiyey qoraalkii Farmaajo ee lasoo dhigay Facebook
Madaxweynaha Waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa markii uu caawa soo saaray warqad uu ku shaaciyey in guddi soo baara uu u magacaabay kiiska dilka Ikraan Tahliil Faarax ayaa waxaa ka dhashay caro iyo fal-celin adag oo shacabku ay ku soo bandhigeen qeybta aragtida ee Pageka Villa Somalia oo halka Page ee lagu baahiyey warkaas.
Badweytims waxay u kuur gashay aragtida bulshada ee ku aadan tallaabada Farmaajo ee la xariirta kiiska Ikraan Tahliil, waxaana idiin soo bandhigeynaa qaar ka mid ah dadkii aragtiyada ama commentiga ka dhiibtay warka Farmaajo ee lagu baahiyey Pageka Villa Somalia.
Arrinta yaab kale ayaa ah in dadka aragtidooda ka soo dhiibtay warqadaas ka soo baxday xafiiska Farmaajo ay ka mideysan yihiin la yaabka tallaabada uu guddigaas ku magacaabay, iyagoo ku tilmaamaya carqaladeyn hor leh oo Farmaajo uu ku sameynayo baaritaanka kiiska Ikraan.
Dadka aan aragtidooda idiin soo uruurinay waxaa ka mid ah Maxamed Deeyoo oo comment uu ka dhiibtay qoraalkii ka Farmaajo ku yiri, “Maxamed Qasaaye mar dhaw waa lagu soo qaban oo caddaalad lagu hor keenayaa bi idnillaah.”
Cabdifitaax Cali Sanbuur ayaa yir, “Yaab wlhi ninkii diley ayaa hadana guddi u saraa fadlan Mohamed Abdullahi Farmaajo kiiska gabdha inaad carqalad ku tahay bulsho weynta Soomaaliyeed waa u jeedaahe, kiiskaan cadalad kama rabtide udaa RW Mohamed Hussein Roble.”
Cabdimahad Guure ayaa yiri, “Mar hore ayaa lagaa rabay Farmaajow. Xiligan waxba soo kordhin meyso waayo RW Rooble ayaa dusha saartay cadaalad u raadinta kiiska ikran Allaha u naxariistee.”
Abshir Yuusuf ayaa yiri, “Xubinka uu soo magacaabayo Taliyaha NISA ayaaba la isku haystaa ee ma Bashir Goobe ayaa soo magacaabaya mise Hebelkaa Farey. Wali wax lee la isku dhex karinaa meeshaan, anagana waan wareernay oo habeen kasta dhafar iyo ha anbanin sidaan isku dhahaynay.”
Axmed Shaur ayaa yiri, “Nabad sugidda oo lagu tabayo dilka sarkaaladda see baaritaanka uga qeeyb qaadan kartaa?! Soomaalida haka tashato kooxdaan.”
Cali Xasan Xuseen ayaa yiri, “Kuwii dilay ayaa kiiska baaritaankiisa ka mid noqonaayo miyaa noo sheegee, war nio meeshaan iskaga tag hasoo hortaagnaan umadaan qof ay dhibsatay hadalkiisa. Gudiga 3bil lamagacaabi waayay hada lamagacaabaayo maxeey tahay.”
“PM Rooble ayaa howshaan u xilsaaran gudigaas ayaa laga sugayaa baritaankaas. Kan wax kama jiro.”
Waxaa xusid mudan in warbaahinta dowladda aysan baahin warka Farmaajo, tallaabadaasna waxaa la shaagay inay ku timid amar ka soo baxay Ra’iisul Wasaare Rooble.
Previous articleSingleParentMeet Examine May 2021. SingleParentMeet was designed to help hectic solitary mom and dad to fulfill one another for many techniques from relationship to nuptials
Next articleSawirro: Nin Soomaali ah oo laba gabar oo Soomaali ah ku dilay Vienna, Austria
Wararkii ugu dambeeyay ciidamo weerar ku qaaday Guriga Taliyaha Haramcad+Ujeedka
DFS oo cambaareysay falkii lagu dhaawacay Wariye Ismaaciil Shiikh Khaliifa
Duufaan koronto la’aan ka dhigtay in kabadan 900,000 guri oo Tokyo ku yaalla
Khasaaro culus oo ka dhashay Saldhig ciidanka Kenya leeyihiin oo la weeraray
Dood weyn oo ka dhalatay $30 milyan oo uu Turkiga ugu deeqay Soomaaliya
SAWIRO:Madaxweynaha Galmudug oo lagu soo dhaweeyay Turkiga+Ujeedka
DHAGEYSO: Muuse Biixi oo Puntland ku eedeeyay hurinta colaada Tukaraq lagana yaabo in kudhintaan boqolaal qof
Xildhibaano sheegay in qaraxii saaka Ex Koontarool uu dhanka khasaaraha u dhow yahay kii Zoobe
XOG: Beesha Habargidir Oo Aan La Dhacsaneyn Hanaanka Dhismaha Maamulka Galmudug